Qiimaha sarrifka doolarka ee suuqyada Boosaaso oo soo kabanaya – Radio Daljir
Bosaso, Mar 10 -Shilinka Soomaaliga oo laga waayey maalmihii lasoo dhaafey suuqyada magaalada Bosaso ayaa sababey in 1-kii Dolar ee lacagta Mareykanka ah in lagu kala sarifto 19,000 oo shilin Soomali ah, Saaka ayaa laga dareemay suuqyada sarifka isbedel inuu kuyimid halkii uu taagnaa sarrifka maalin ka hor, iyadoo 1-kii doolar lagu kala sarifanayo 21-22 kun oo shilinka Soomaaliga ah.
Sarrifka lacagta Mareykanka ayaa hoos u dhacay suuqyada Puntland,waxaana 1-kii doolar oo horay u ahaa 30,000 sh.so. ah uu gaaray sarrifkiisa 19,000 oo shillin Soomaali ah.
Soo kabashada qiimaha sarifka doolarka ee laga dareemay maanta magaalada Bosaso ayaa kusoo aadeysa xili maalin kahor wasiirka wasaarada maaliyada dawlada Puntland oo la hadley warfidiyeenada uu sheegay in dowlada dhexe ee federaalka iyo dawlada Puntland ay soo daabacayaan lacago bedeli doonta lacagta xiligaan la isticmaalo.
Sikasta oo ay ahaataba, labadii maalmood ee ugu dambeeyey ayaa siweyn loo dareemey suuqyada Bosaso sicir maciishada daruuriga iyo hoos udhaca Qiimaha lacagta ah, iyadoona saameyn xoogan ay yeelatay dadka danyarta ah iyo Barkacayaasha.